Fanadiovan’ny CSM :: Hisy mpitsara valo hiakatra Filankevitry ny fitsipi-pifehezana • AoRaha
Fanadiovan’ny CSM Hisy mpitsara valo hiakatra Filankevitry ny fitsipi-pifehezana
Nisokatra tetsy amin’ny biraony, tetsy Tsaralalàna, omaly ary hifarana amin’ny zoma ho avy izao ny fivoriana ara-potoana farany ataon’ireo mpikambana ao amin’ny Filankevitra ambonin’ ny mpitsara (CSM). Hisy mpitsara valo hiakatra Filankevitry ny fitsipi-pifehe­zana mandritra io fotoana io.
Ny fitondran-tena tsy mendrika, ny fanitsakitsahana ny sata mifehy ny mpitsara, ny fanaovana kolikoly… no antony hampiakarana azy ireo fitsipi-pifehezana, araka ny fanazavan-dRanadialison Angelo, sekretera jeneraly mpisolo toerana ao amin’ny CSM, omaly.
“Efa nahavita ny dingana rehetra, toy ny fanaovana fanadihadiana sy ny fanan­gonana porofo… ny CSM vao niroso amin’izao fampia­karana fitsipi-pifehezana izao. Sazy hentitra mifanaraka amin’ny fahadisoana vitan’ ireo mpitsara voampanga no hiandry azy ireo.
Tsy hisy mihitsy ny kiantranoantrano. Hanatsara ny fomba fandrai­sana fanapahan-kevitra ny eto anivon’ny CSM satria tanjona ny hanadiovana ny tontolon’ ny Fitsarana faran’izay haingana. Tsy maintsy amin’ity fivoriana ara-potoana farany ity no hanapahana mikasika an’ireo raharaha ireo.
Efa toromarika nomen’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry sy ny minisitry ny Fitsarana, Randrianasolo Jacques, nandritra ny fivori­-ana niarahan’ny tamin’ireo mpikambana ato amin’ny CSM tamin’ny volana aogo­sitra lasa teo izany”, hoy izy.
Fitarainana 192 hafa
Tsy nanome ny pitsopi­tson-draharaha momba an’ ireo mpitsara hiakatra fitsipi-pifehezana ireo ity sekretera jeneraly mpisolo toerana ity. “Tsy azo atao ny mamoaka ny tsiambaratelon’ny raha­raha, saingy rehefa vita izany dia havoaka ao anatin’ny gazetim-panjakana ny valin’ ny fanadihadiana mba ho azon’ny rehetra jerena”, hoy izy.
Ankoatra an’ireo raha­raha voalaza tetsy ambony tetsy ireo dia naharay fita­rainana roa amby sivifolo amby zato hafa ny CSM hatramin’izao. “Tsy mbola nahangonana porofo ireo fitarainana ireo hatreto saingy saika raharaha mikasika ny fanararaotam-
pahefana sy ny fihoaram-pefy nataona mpitsara avokoa izany”, hoy hatrany Ranadia­lison Angelo. “Tsy tokony hatahotra hitory mpitsara ny olom-pirenena rehefa ma­nana porofo mazava izy ireo. Aza matahotra hoe mpitsara ilay olona hotoriana dia hihemotra. Misokatra ho anareo ny CSM ary vonona handray ny fepetra sahaza an’ireo mpitsara mpanararao-pahefana izahay”, hoy hatrany izy nanentana.
Fahatsiarovana mpanakanto :: « Olona mahavariana sady mpampihavana i Dadah », hoy ireo namany
Antenimierampirenena :: Amin’ny volana desambra vao hodinihina ny Tetibolam-panjakana 2020